स्लो कुकर सम्पूर्ण चिकन र ग्रेभी - व्यंजनहरु
टमाटर प्याज र खुर्सानीको साथ स्विस स्टेक
एगप्लान्ट परमेसनसँग के खानाहरू जान्छन्
भरिएको पोर्क चपहरू मसरूम सूपको साथ
म कहाँ प्यान्को रोटी टुक्रा किन्न सक्छु
स्लो कुकर सम्पूर्ण चिकन र ग्रेभी
स्लो कुकर सम्पूर्ण चिकन र ग्रेभी ! पूरा आइतवारको खाना क्रकपटमा सजिलो भयो। जबकि यसले प्रिपको मात्र मिनेट लिन्छ, यो कोमल, रसदार क्रोक भाँडो कुखुरा र ग्रेभी स्वादहरू तपाई जस्तो कि सबै दिन भान्छामा।
यसले उत्तम सजिलो हप्ताको भोजनको साथ सँगै सेवा गर्दछ लसुन फ्याँकिएको पनी आलुहरू र हाम्रो मनपर्ने चीसी ब्रोकोली फूलगोभी कासेरोल ! तपाईंको पूरै परिवारले यो सजीलो ढिलो कुकर सम्पूर्ण कुखुरा र ग्रेभीलाई माया गर्न गइरहेको छ!
यदि तपाईंले कहिले पनि पूर्ण कुखुरा पकाउनु भएको छैन ढिलो कुकर पहिले, तपाईं यो नुस्खा प्रेम गर्न जाँदैछन्! म चाहन्छु कि मैले तपाईंलाई कुखुराको शब्दहरू भन्दा अद्भुत कुरा भन्न सक्छु! यो शाब्दिक रूपमा खानको लागि तयारीको मिनेट हो जुन स्वाद गर्दछ कि तपाईं दिनभर भान्छामा स्लेभिंग गर्दै हुनुहुन्छ!
उत्तम मिर्च पनीर फ्राईस्ट फूड
चिकन मेरो रात्रिभोजको समय हो - हामीलाई यो मनपर्दछ ग्रील्ड , पकाइएको र चीजले भरिएको वा पनि टाकोस को लागी shredded तर मैले स्वीकार्नु पर्दछ, क्रकपटमा यो पूरै कुखुरा भनेको मेरो आइतवार रातीको खाना हो। यो एक पूरै पारिवारिक डिनर हो जसमा आलु र भिजीहरू दिइन्छ तर यो पनि एक उत्तम तरिका हो सहजै कुखुराको कुखुराको बोटमा रोटेसरि चिकनको ठाउँमा।
कसरी पूरै कुखुरा एक सुस्त कुकर पकाउने
चाँडो घरेलु रब एक कुखुरामा थपिन्छ जुन त्यसपछि स्लो कुकरमा कोमल र रसदार पकाउँछ।
म यसलाई तयार गर्दछु Q क्यूटी ढिलो कुकर र म प्याडीको तल्लो भागबाट कुखुरालाई हल्का पार्न बेल्ट अप पन्नी जोड्दछु तर यदि तपाईंसँग एक सानो र्याक छ जुन तपाईंको ढिलो कुकरमा फिट हुन्छ तपाईं निश्चित रूपले त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ! पखेटासहित क्रकपटको तल केही प्याज र केही सेलरी थपेमा सबै भन्दा रमाइलो र काल्पनिक ग्रेवी हुन्छ!
यदि तपाईं एक कुरकुरा छाला चाहनुहुन्छ भने, सेवा को लागी केहि मिनेट को लागी ब्रेलरबाट66 बारे मा ब्रेल गर्नुहोस्।
धेरै जसो कुखुराले ग्रेभीको लागि प्रशस्त टिप्सहरू उत्पादन गर्दछ तर यदि तपाइँ थप चाहानुहुन्छ भने केही कुखुराको ब्रोथमा भर्नुहोस्। कर्नस्टार्चको द्रुत स्लरी सँगै मिसाएर यसलाई ढिलो कुकरमा थपेको छ जबकि कुखुराको बास्नाले रिच स्वाददार ग्रेवी सिर्जना गर्दछ। म कहिलेकाँही ग्रेभीमा मशरूमको एक डिब्बा थप गर्दछु (वा खाना पकाउन अघि ढिलो कुकरमा ताजा मशरूम जोड्नुहोस्)।
तपाई आश्चर्यमा परिरहनु भएको छ यदि तपाईको क्रक भाँडोमा पूरै कुखुरा खाना पकाउनु सुरक्षित छ र उत्तर हो हो, यो सुरक्षित छ किनकि क्रोकपट मासु कम र ढिलो मासु पकाउने उद्देश्यले राखिएको हो। गर्नुहोला कि तपाईंको ढक्क्दो चिसो राम्रोसँग छ। म निश्चित रूपमा स्लो कुकरमा स्थिर कुखुराको सिफारिश गर्दिन, यदि सम्पूर्ण कुखुराको प्रयोग गर्दै तपाईंले यो पग्लनुभएको छ भनेर निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने।
स्ट्रबेरी केक सेतो चकलेट चिप्सको साथ कुकिज मिक्स गर्दछ
सबै ढिलो कुकरहरूसँगै, पकाउने समय केही फरक हुन सक्छ, तपाईं यो निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंको कुखुराको फिलामा १ 165 डिग्री पुगेको छ।
तयारी समय। मिनेट कुक समय। घण्टा कुल समय। घण्टा । मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली एन स्लो कुकर सम्पूर्ण चिकन र ग्रेभी! एउटा भाँडोमा पूरा आइतवारको खाना। जबकि यसले प्रिपको केही मिनेट मात्र लिन्छ, यो कोमल, रसदार कुखुरा र ग्रेभी स्वादहरू तपाई जस्तो कि सबै दिन भान्छामा। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ सानो कुखुरा , लगभग 4lbs
▢दुई स्लाइसहरू प्याज
▢दुई चम्मच जैतुनको तेल
▢कुखुराको ब्रोथ (वैकल्पिक)
▢१ चम्मच पेपरिका
▢१ चम्मच धूम्रपान पेपरिका
▢१ चम्मच मसाला नुन (वा स्वाद लिन)
▢१/२ चम्मच काली मिर्च
▢१/२ चम्मच अजमोद
▢१/२ चम्मच थाइम
एउटा सानो कचौरामा सबै मसाला मिश्रण मिक्स सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्।
जैतून तेलको साथ कुखुरा ब्रश र कुखुरा मा मसाला मालिनुहोस्।
पन्नीको बलहरू माथि रोल गर्नुहोस् र प्याजको २ मोटा स्लाइसहरूसँग ढिलो कुकरको तल राख्नुहोस्। पन्नीमा कुखुरा राख्नुहोस्, स्तनको माथि माथि राख्नुहोस् ताकि यो सुस्त कुकरको तल्लोबाट केही हदसम्म माथि उठाइन्छ। (तपाईं चाहानुहुन्छ भने प्याज र गाजर भाग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ)।
कभर र कम --8 घण्टा वा उच्च -5--5 घण्टा मा खाना बनाउनुहोस्। (१55 डिग्री)
एउटा सानो प्यानमा कुखुरा र स्थान हटाउनुहोस्। कुरकुरा छालामा वैकल्पिक to- minutes मिनेट (वैकल्पिक)। टुक्रा गर्नु अघि १० मिनेट आराम गर्नुहोस्।
ढिलो कुकरबाट पन्नी र प्याज हटाउनुहोस् र उच्चमा मोड्नुहोस्। यदि आवश्यक छ भने, लगभग २ कप तरल पदार्थ बनाउन श्रोथ थप्नुहोस्।
एउटा सानो कटोरामा, table चम्मच कर्नस्टार्चलाई table चम्मच पानीसँग मिलाउनुहोस् स्लरी सिर्जना गर्न।
कर्नस्टार्चको कम्तिमा २/3 ड्रिपिंग्स / ब्रोथमा हाल्नुहोस् र उच्चमा पकाउनुहोस्। तरलताको मात्रामा निर्भर गर्दै तपाईंले चाहिएको स्थिरतामा पुग्न कोर्नस्टार्च स्लररी थप्न आवश्यक पर्दछ। सेवा दिन अघि कम्तिमा minutes मिनेट पकाउन दिनुहोस्।
नुन र मरिच संग स्वाद र मौसम।
प्रदान गरिएको पोषण जानकारी एक अनुमान हो र खाना पकाउने विधिहरू र प्रयोग गरिएको सामग्रीको ब्रान्डमा फरक हुनेछ। पोषण सम्बन्धी जानकारी चिकन ब्रोथ बिना गणना गरीयो
क्यालोरिज:9,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:35g,मोटो:35g,पागलिएको बोसो:9g,कोलेस्ट्रॉल:१2२मिलीग्राम,सोडियम:16१मिलीग्राम,पोटासियम:392मिलीग्राम,भिटामिन ए:6060०IU,भिटामिन सी:।मिलीग्राम,क्यालसियम:एक्काइसमिलीग्राम,फलाम:१.9मिलीग्राम
कीवर्डक्रोक पट कुखुरा, क्रोकपोट कुखुरा, रोटिसरी कुखुरा, ढिलो कुकर सम्पूर्ण चिकन कोर्समुख्य मार्ग पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।बाट रब अनुकूलित Food.com
एप्पल ग्लेज्ड बेक्ड ह्याम
Cheesy बेकन चिकन